नायिका नीतालाई भेट्न भारत पुगे हरिहर, लेखिन यस्तो स्टाटस! – ramechhapkhabar.com
नायिका नीतालाई भेट्न भारत पुगे हरिहर, लेखिन यस्तो स्टाटस!
ज्योतिष हरिहर अधिकारी र नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी नायिकाको प्रेम चर्चा चलेको पनि करिब एक बर्ष बढी भैसक्यो। लामो समयदेखि प्रेमको चर्चा बटुलिरहेका यी दुईले सार्वजनिक रुपमा भने आफुहरुको प्रेमलाई स्वीकार गरेका छैनन्। तर सामाजिक संजालमा भने यी दुईबीच प्रेम रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
नायिका निता यतिबेला भारतको आगरामा छिन् । उनि भोजपुरी चलचित्र ‘माही’ को छायांकनको लागि आगरामा बसेकी हुन्। त्यस्तै ज्योतिष हरिहर पनि आगरा पुगेका छन् । सामाजिक संजालमा नीता र हरिहरले एउटै सनग्लास लगाएको तस्विर शेयर गरेपछि नै यी दुई भारतमा रहेको अनुमान लगाइएको हो। नीताले आफ्नो एक तस्विर शेयर गर्दै स्टाटस लेखेकी छिन्, तिमि आयौ, बहार आयो’
काठमाडौं । यो वर्षको मिस ब्युटिफुल नेपालको उपाधि पूर्णिमा क्षत्रीले र मिसेस ब्युटिफुल नेपालको उपाधि पवित्रा वञ्जारा जितेका छन् । दक्ष इन्टरनेसनल प्रालिले राजधानीमा एकसाथ आयोजना गरेको अविवाहित र विवाहित महिलाबीचको सौन्दर्य प्रतियोगितामा क्षत्री र बञ्जाराले शीर्ष उपाधि जितेका हुन् ।
मिस ब्युटिफुल नेपाल २०२१ को ताज जितेकी क्षत्रीले युट्युब मस्ट भ्युज र मल्टि मिडिया च्वाइस अवार्डको अवार्डसमेत प्राप्त गरेकी छन् । उनले उपाधिसँगै विभिन्न उपहार र अवसर प्राप्त गरेकी छन् ।
मेकअप आर्टिस्ट टेकराज पाण्डेले काठमाडौंको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजना गरिएको मिस ब्युटिफुल नेपालतर्फ गीता उप्रेती फस्ट रनर्सअपका साथ बेस्ट एक्टिभ, मस्ट आइकोनिक आइज र वेस्ट फिजिक, गीता गुरुङ सेकेन्ड रनर्सअपका साथ बेस्ट ¥याम्पवाक, पूजा नाथ थर्ड रनर्सअपका साथ मस्ट पपुलर, फेसन र्आकन र मस्ट ट्यालेन्ट अवार्ड जित्न सफल भए ।
यस्तै, सुष्मिता देव मस्ट पन्चुअल, विजया रञ्जित भ्युअर्स च्वाइस र बेस्ट डान्सर, सविना खुलाल मस्ट डिसिप्लेन र वेस्ट पर्सनालिटी, सोन्या शाही बेस्ट स्माइल, मनीषा यादव थापा मस्ट फोटोजेनिक, अनिता तामाङ बेस्ट हेयर तथा उषा फुयाँल बेस्ट स्किनको उपाधि बिजेता बने ।
समारोहमा विवाहित महिलाबीचको प्रतियोगितामा पवित्रा बञ्जारा मिसेस ब्युटिफुल नेपाल बनिन् । उनले वेस्ट ¥याम्पवाक, वेस्ट स्किन र मस्ट ट्यालेन्टेड अवार्ड पनि जितिन् । यस्तै, सुशीला श्रेष्ठ फस्ट रनर्सअपका साथमा बेस्ट स्पिच र मस्ट पन्चुअल, मञ्जु अधिकारी सेकेन्ड रनर्सअपका साथमा मस्ट एक्टिभ, अन्जु न्यौपाने थर्ड रनर्सअपका साथमा मस्ट फोटोजेनिक बन्न सफल भए । सरु थापाले मस्ट पपुलरको उपाधि हासिल गरिन् ।